नर्भिकमा मूत्र र श्वासप्रश्वास रोगको फ्री ओपिडी हुने, यसरी लिनुस सेवा « Bizkhabar Online
नर्भिकमा मूत्र र श्वासप्रश्वास रोगको फ्री ओपिडी हुने, यसरी लिनुस सेवा
5 October, 2021 1:36 pm
काठमाडौं । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलको निःशुल्क ओपिडी अभियानअन्तरगत आउने शनिवार दुई फरक विज्ञहरुको टिमले निःशुल्क सेवा दिने भएको छ । नर्भिक अस्पतालमा रहेको यूरोलोजिष्टको टिम र श्वासप्रश्वास विशेषज्ञको टिमले निःशुल्क ओपिडी संचालन गर्ने भएको हो ।
यूरोलोजिष्टको पूरा टिम नै सहभागी भई निःशुल्क ओपिडी सेवा संचालन गरिने अस्पतालले जनाएको छ । यो टिमले बिहान १० बजेदेखि मध्यान्ह १२ बजेसम्म मूत्र तथा मूत्रनलीसँग सम्बन्धित समस्या भएकाहरुको निःशुल्क जाँच गर्नेछ ।
यस्तै, बिहान १० देखि १२ बजेकै समयमा अस्पतालका छाति तथा श्वासप्रश्वास रोग विशेषज्ञ डा. अच्युतभक्त आचार्यले निःशुल्क ओपिडी संचालन गर्नेछन् । छाति तथा श्वासप्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्या भएकाले डा. आचार्यको ओपिडी क्लिनिकमा सहभागी भएर लाभ लिन सक्नेछन् ।
हुवासिन सिमेन्टलाई विद्युत दिने स्वीचिङ स्टेसन सञ्चालनमा, अब हुवासिनले १३२ केभी प्रशारणलाईनबाट विद्युत पाउने
काठमाडौं । धादिङमा निर्माणाधीन हुवासिन सिमेन्ट उद्योगलाई विद्युत आपूर्ति गर्ने स्वीचिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएको छ
मनकामना केबलकार दशैँमा दुई दिन बन्द, असोज ३० गतेदेखि पुनः नियमित सञ्चालन हुने
काठमाडौं । मनकामना केबलकार सेवा दुई दिन बन्द हुने भएको छ । बिहिबार र विजया
कोका–कोलासँग भाइबरको साझेदारी, भाइबरले ल्यायो कस्टम दसैँ लेन्स
काठमाडौं । भाइबरले चाडपर्वको अवसर पारेर कोकसँग साझेदारी गरेको छ । भाइबरले नयाँ र रोमाञ्चक
उद्योग विभागमा आयो मनाङमा बन्ने एउटै आयोजनाका लागि १० अर्ब ४३ करोड लगानीको प्रतिवद्धता
काठमाडौं । उद्योग विभागमा आयो मनाङमा बन्ने एउटै आयोजनाका लागि १० अर्ब ४३ करोड लगानीको